Mkpụrụ ubi | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Mkpụrụ ubi
Grass goatgrass (Galega) - na-ezo aka n'ụdị nke nnukwu na perennial herbaceous osisi nke bụ akụkụ nke legume ezinụlọ. E nwekwara aha ndị ọzọ maka ewu, dị ka rutevka, goat rue, forester. E nwere ọtụtụ ụdị kozlyatnika - usoro nlekọta na ọgwụ. Ihe kachasị mmasị bụ mmepụta nke ewu ewu, n'ihi na ọ na-arụ ọrụ dịka ezigbo ihe oriri.
Ryegrass Ọcha (Perennial)
Ryegrass nke na-ata nri, nke a makwaara dị ka English ryegrass na chara chara, bụ osisi nke herbaceous nke mkpụrụ osisi Chaff, nke, n'aka nke ya, nọ n'ezinụlọ ọka. Osisi ogwu a na-ebi na Europe, North Africa na Western Asia. Mgbe ụfọdụ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ihe ijuanya, a pụrụ ịhụ perennial ryegrass n'ógbè ndị dị n'ebe ọwụwa anyanwụ Eshia, ruo n'Ebe Ọdịda Anyanwụ Siberia.
Anyị na-eto ubi hibiscus
Hibiscus bụ osisi nke ezinụlọ Malvaceae. Ọ bụ ndị na-eto eto hụrụ ya n'anya nke ukwuu, n'ihi na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị osisi a nile na-eto eto nke ọma. Okooko osisi, ọbụna n'ime otu ụdị, dị iche iche. A maara ihe karịrị ụdị 200 na ihe dịka ụdị osisi 500 a. Ị ma? Otu ihe di iche iche nke hibiscus nile - ndu ndu nke ndu.
Kedu esi eji Baikal EM-1 na saịtị gị
Usoro ihe omumu nke EM na-abanye n'akụkọ ihe mere eme nke ihe omumu di ka nri ndi ozo. E nwere ike idebe akụkọ ihe mere eme nke ụdị nri ndị a n'oge oge ndị Ijipt. Mana nsonaazụ ọma, nke natara n 'ụwa niile, pụtara na 1988. Onye ọkà mmụta sayensị Japanese bụ Teruo Khiga kere ọgwụ dị mgbagwoju anya nke bacteria na-eguzogide ọgwụ iji zụlite ala ala na-eme nri ma kpọọ ya EM - ihe ndị dị irè.
Kedu ụdị clematis dị iche iche
Clematis nwere ike iju anya ma mee ka onye ọ bụla nwee ihu ọchị, ọmarịcha nke ọma, ụdị dị iche iche, ọhụụ dị iche iche, isi ísì. Onye bi na subtropics dị mma na Europe na nwere ihe karịrị 300 ụdị. Oko osisi ebube nwere ike, dịka ahihia, icho mma ahihia gi, jiri osisi vine ma o bu osisi toro na mbara ihu.
Atụmatụ nke na-eto eto wisteria n'ogige
O nwere ike ịbụ na osisi Wisteria bụ osisi kachasị mma n'ụwa. Onye nwere obi ụtọ ọ dịkarịa ala otu ugboro ná ndụ iji chebara okooko osisi ya echiche ma chee na ọ bụ ísì ụtọ pụrụ iche, ga-eburu n'uche oge a magburu onwe ya maka ndụ. Ogologo ihe omuma nke ndi mmadu nwere ike iru ihe ruru okara onu, ha na-ekpuchi osisi ahu n'ime uzo di iche iche, ma n'ilegide ha anya o yiri ka o daba n'akwukwo akuko.
Uru stonecrop bara uru, iji ọgwụ eme ihe maka ọgwụgwọ
Dị ka mgbe mgbe na-eje ije na ogige ntụrụndụ na ahịhịa ọhịa, anyị na-aṅa ntị na ahịhịa anyị na-eje ije. Ma mgbe mgbe, ahịhịa a nwere ike ịghọ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị nzọpụta, mgbe ahụ, enyemaka dị egwu na enyemaka maka ọgwụgwọ ahụ. Ihe a ma ama: ọdịdị a ma ama bụ nanị ụlọ nkwakọba ihe nke organic acid. O nwere oxalic, acetic, isolimonic, malic, glyceric, fumaric, citric na succinic acid.
Ihe niile ị chọrọ ịma banyere ịgha mkpụrụ, ị ga-esi na-eto osisi shrub mgbe ọ bụla
Thuja bụ otu n'ime ndị nnọchianya kacha egbuke egbuke nke osisi osisi coniferous. A na-ejikarị ya eme atụmatụ nhazi ihu ala. Ngwurugwu pyramid ndị mara mma nke osisi a dị oke nlezianya na nlekọta ma nwee ihe bara uru iji wepụ ihe ndị na-eme ihe n'ime ikuku - phytoncides. Nke a bụ ihe ndị mara mma na-acha akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ndị nọ n'oge okpomọkụ, ndị maara otú e si eto thuja, dabara.
Kedu ihe mere na ọ bụghị oge ntoju forsytsiya, njehie ndị dị na nlekọta nke ohia
Forsythia (aha ọzọ bụ Forsytia) bụ ezigbo orbamental shrub, onye nnọchiteanya nke ezinụlọ olive, nke ga-eme ka obi dị ụtọ na mmiri n'oge mbụ ọkụ. Osisi nke na-acha ọkụ ga-eme ka ọganihu nke ogige gị dị mma, ma ọ ga-emekwa ka ile anya na-ekwo ekwo n'etiti ndị niile na-agafe agafe.
Atụmatụ maka ịkụ na ịchekwa enothera
Enotera bụ okooko osisi nke mara aha ya n'etiti ya, ya bụ: "primrose" ma ọ bụ "kandụl nke mgbede". Osisi kwesịrị ka aha ndị dị otú ahụ dabere na agba odo ya nke buds na oge ntoju dị ukwuu. Ị ma? Akwukwo genote na-agụnye ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke osisi na-emepụta kwa afọ, nke ọma na nke osisi.
Kedu uru tarragon bara uru, ọgwụgwọ eji agwọ ọrịa?
Ọtụtụ ndị nwunye nwanyị nwere mmasị na ihe tarragon bụ na maka ebumnuche ọ na-eji. A na-akpọ osisi a "Tarkhun-ahịhịa," ọ bụ nke anụ ọhịa Wormwood. Akụkụ a ga-agwa gị banyere uru bara uru nke osisi ahụ, yana gbasara ọrịa ndị a pụrụ iji ọgwụgwọ nke osisi a magburu onwe ya gwọọ. Ihe omimi nke tarragon Ihe mejupụtara nke osisi a na-enyere aka imata ebe obula na n'okpuru oria ndi o nwere ike iji.
Tarragon: nhọrọ nke ụdị dị iche iche
Ezigbo ezinụlọ na-anọchi anya nchịkọta ụlọ nke ndị na-eto osisi na ndị na-elekọta ubi site na osisi toro ogologo nke osisi tarragon (tarragon), nke na-acha na August-September na-acha odo odo (ọtụtụ mgbe) okooko osisi. Ọ na-eme ka ọ bụrụ nke na-adịghị egwu ma ọ bụghị nke na-adịghị egwu. Eztec Aztec bu aha nke Mexico oge ochie. Na-arụsi ọrụ ike.
Medicinal Njirimara nke odo odo stonecrop karịa bara uru "oke bekee kabeeji"
Osisi nke osisi, nke nwere ohia anu na odo odo, nwere otutu aha (ogwu choro, ihe ndi ozo, nkume ocha odo odo) ma ama ya maka ihe ogwugwu ya. Mkpụrụ osisi ahụ na-agụnye ihe dị ka ụdị 600, nke bụ ma oyi-hardy na ebe okpomọkụ, evergreen na deciduous.
Kedu ka esi eto tarragon n'ime ubi gị
Tarragon bụ osisi perennial, otu n'ime ụdị wormwood. Ị ma? Nke a bụ naanị ụdị wormwood nke na-enweghị ụdị njirimara nke osisi ndị a. Ogologo nwere ike itolite ruo mita nkeji na ọkara, akwụkwọ ndị ahụ dị warara, nke ahụ na-acha akwụkwọ ndụ-acha akwụkwọ ndụ, nke dị ọcha, nke dị na nsọtụ nke osisi.
Esi esi na-ebute uto ụta na ọdịda
Thuja ma ọ bụ, dị ka ndị mmadụ na-akpọ ya, "osisi ndụ" bụ mgbe ọ bụla si na cypress ezinụlọ. Tui adịghị mma na ala na ihu igwe, n'ihi ya, ọ dị mfe ịbanye n'obodo ukwu. Ha na-eji ebe ọ bụghị naanị maka landscaping megalopolises, kamakwa na-elekọta ugbo. Osisi ndị dị mma na-ama ókèala ahụ ma na-akụpụta ha na corridors ndụ.
Ndị na-eguzogide ọgwụ dị iche iche na-eguzogide oyi na-eguzogide na ọdịda anyanwụ thuja na nkọwa na foto
Owugwu Thuja bụ osisi a na-achọ mgbe ọ bụla. Udo-emede, ntu oyi na-eguzogide, e nwere osisi na osisi. Na Europe, e si na North America bịa. Ná mmalite biri n'akụkụ osimiri na swamps, undemanding na-elekọta. Ya mere, ọ bụ ezigbo ewu ewu na ornamental ugbo. Ebe ọdịda anyanwụ Thuja nwere ọtụtụ iche, ma tupu ị họrọ nke na-amasị gị, ị ga-achọ ịma atụmatụ ya.
Nzuzo nke akuku na ilekọta iberis
Iberis mara mma, nke ndị ezinụlọ ndị ahụ nwụrụ anwụ, maara nke ọma na ndị alpine slides, ihe ndị e ji eme ihe na floral tubs, rockeries. N'ile anya, o yiri kabeeji na radish. Iberis bụ ihe na-enweghị atụ na ịkụ ihe ma na-elekọta, ya mere, ọbụna onye na-akwa akwụkwọ novice nwere ike ijikwa ya. Ị ma?
Ụdị na ụdị osisi cypress
Ụdị osisi cypress na-adịgasị iche n'etiti onwe ha - ọbụna ndị ọkà mmụta sayensị enweghị ike ịgbakọ ọnụ ọgụgụ ha n'ụzọ ziri ezi, ha na-akpọ nọmba site na 12 ruo 25 ma na - akpata arụmụka arụ ụka: nke ezinụlọ ma ọ bụ ụdị nke gụnyere ụdị a. Ka o sina dị, mmadụ nile na-eji osisi cypress osisi eme ihe n'oge ochie. Osisi a na-enweta ịhụnanya mmadụ, n'ihi na o nwere: osisi dị nro na nke ọkụ na-enwe nnukwu resin ọdịnaya (ngwaahịa cypress nwere ike chebe ya maka ọtụtụ narị afọ); ihe ojoo (ihe ndi ozo na ihe ndi ozo di iche iche na-ezere cypresses); ihe ísì ụtọ (ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ). àgwà nlekọta; mara mma ma chọọ.
Atụmatụ kachasị mma maka ilekọta n'èzí
Calla adọtara mgbe nile ụdị ọdịdị dị iche iche, nhụpụta na-adịghị mma ma na-esi ísì ụtọ. Ma ndị na-akụ mkpụrụ osisi na-ahụ ya n'anya n'ihi eziokwu ahụ bụ na ifuru nwere ike ịmalite ma ọ bụ n'ubi ma n'ime ite. Na nke ọ bụla n'ime okwu ndị a, calla bụ osisi na-adịghị mma. Osisi nke callas na ubi na mmiri. Akuku nke callas na mbara ala na-eme naanị na mmiri.
Ihe niile ị ga - achọ ịma ka ị na - eto sunflower: ndụmọdụ bara uru maka newbies
Helianthum (nke Gris, Helios - anyanwụ na anthos - ifuru), na Russian - sunflower, bụ osisi mara mma magburu onwe ya nke na-acha odo odo, ọbara ọbara, pink ma ọ bụ okooko osisi ọcha, nke, n'ihi na ọ naghị enwe ọganihu na ngwa ngwa n'ike, nwere ike icho ọ bụla ezumike nkata. Ọ bụ osisi ahịhịa na-agba gburugburu ruo 30 cm n'ogologo na epupụta nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ gbara ọchịchịrị ma ọ bụ ọlaọcha-isi awọ ndo.